October 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 7:25:00 PM 0
Anonymous at 8:49:00 AM 0
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ည ဆို ဆီမီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးနေတော့မယ်…
ကောင်းကင်က လမင်းကြီးအရောင်နဲ့လူ့ပြည်ကလျှပ်စစ်မီးအရောင်နဲ့ ဆီမီးအရောင်တို့အပြိုင်အဆိုင် သူနိုင်ကိုယ်နိုင် လင်းလက်ကြတော့မယ် ...
မြတ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကို ရည်စူးပူဇော်ကြတာပါ ...
တစ်ချို့ကတော့ အပိုအလုပ်တွေပါကွာလို့ ရှုံ့ချကြသလို အလကားဖြုန်း တီးနေတာပါ လို့ ကဲ့ရဲ့သူတွေလဲ ရှိနေကြမှာပါ ...
ဂုဏ်တော်ကို ရည်မျှော်ပြီး ပူဇော်ကြတာ အမှတ်ရကြတာဟာ ...
ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူရဲ့ အုပ်ဂူဘေးမှာ လွမ်းသူ့ပန်းခွေပေးတာနဲ့ မနှိုင်းယှဉ် ချင်ပါဘူးးး
ကျဆုံးသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အုပ်ဂူဘေးမှာ ရပ်ပြီး အလေးသွားပြုနေသူတွေ နဲ့ လဲ ဥပမာ မပေးချင်ပါဘူးးး
အတုမရှိ အတူမရှိတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ရည်စူးနေတာမို့ ဘာနဲ့မှ မတူပါဘူး … အတူမရှိဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဘုရားကို ရည်စူးရင် ရုပ်ပွားစေတီတွေမှာ ပူဇော်ပါလား ?
အိမ်မှာတွေ ကျောင်းမှာတွေ သစ်ပင်မှာတွေ ဆီမီးတိုင်တွေ ထွန်းညှိတာက အပိုမဟုတ်ဘူးလား ? ...တဲ့။
ဒီလိုတွေးမိသူတွေအတွက် ဆရာသမားရဲ့ လမ်းညွှန်းတဲ့ မီးထွန်းနည်းလေး
" မင်းတို့ အခု သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာကျောင်းတို့ အိမ်တို့မှာ မီးထွန်တာ အပျော်ထွန်းတာ မဖြစ်စေနဲ့ ကြည်နူးမှုနဲ့အတူ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ လုပ်ကြပါ ...
ဥပမာ- ကျောင်းမှာ ဆီမီးထွန်းတယ်ဆိုပါစို့
ဒီလိုလေး ရည်ရွယ်ချက်ထားပါ .. ဒီလိုလေး စိတ်ထဲက ရည်မှန်းထားပါ..
ဒီကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းစောင့်နတ်တွေ ...
အခုဆီမီးတိုင်များဖြင့် ဘုရားရှင် အား လှူဒါန်းပူဇော်နိုင်ရန် သင်တို့အား စွန့်လှူပါ၏ ...
ငါစွန့်လိုက်သော ဆီမီးအလင်းရောင်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်စူးပူဇော် ၍ ကုသိုလ်ယူကြပါကုန်လော့ ...
အိမ်မှာထွန်းရင်လဲ အိမ်စောင့်နတ်တွေ ...
အခုကျွန်ုပ်ထွန်းထားသောဆီမီးတိုင်များဖြင့်ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းပူဇော်နိုင်ရန် သင်တို့အား စွန့်လှူပါ၏ ...
ထွန်းငြိမယ်ဆိုရင်လဲ ဤသစ်ပင်၌ စိုးအုပ်နေသော ရုက္ခစိုးနတ်သည် အခု ကျွန်ုပ်ထွန်းထားသော ဆီမီးတိုင်များဖြင့် ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းပူဇော်နိုင်ရန်
သင်တို့အား စွန့်လှူပါ၏ ...
ငါစွန့်လိုက်သော ဆီမီးအလင်းရောင်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်စူးပူဇော် ၍ ကုသိုလ်ယူကြပါကုန်လော့...
စိတ်ကနေဖြစ်စေ နုတ်ကနေဖြစ်စေ ညွှတ်ပေး ပြောပေးရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ် ကိုယ် ထွန်းလိုက်တဲ့ ဆီမီးလေးတွေ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသွား သလဲ…
ဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာကောင်းသလဲ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အပျော် သက်သက် မဟုတ်တော့ဘူးးး
ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာသမားရဲ့ သြ၀ါဒ ပါ…
ကျွန်ုပ်ရော သီးတင်းသုံးဖော်များပါ ကျောင်းဆောင် မှာတွေရော ကျောင်းဝင်ရှိ သစ်ပင်မှာတွေပါ ဆီမီးလေးတွေ ထွန်းညှိ ပူဇော် ရင်း ကြည်နူးခဲ့တာလေး ကို ပြန်လည်တမ်းတ လွမ်းဆွတ်သတိရရင် ဆရာ သြ၀ါဒလေးကို ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ် ...
ဒါကတော့ ဆရာသမားရဲ့ သြ၀ါဒလေးပါ...
မိမိရဲ့ နှလုံးသွင်းအားလျော်စွာ အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင် ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်လို့လဲ ရပါတယ် ...
အဓိကကတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ ကြည်နူးမှုလေး ဖြစ်နေဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလား....
မိမိနှလုံးသွင်း က ကုသိုလ်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ် ...
နှလုံးသွင်းမှု မှားသွားရင် မကောင်းတဲ့ နှလုံးသွင်းမိရင်တော့ အကုသိုလ်ဖြစ် မှာပါ….
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ အားလုံး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဆီမီးပူဇော်မှုဖြင့် ပူဇော်နိုင်ကြပါစေ…။
Post by ; Ven. Vunna
~~~ ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်း ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ငြိမ်းအေး နိုင် ကြ ပါစေ ~~~